Sida loo ogaado Cidda ku aragtay Sawiradayda Instagram Xeeladaha ugufiican! ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo ogaado cidda aragtay sawirradayda barta Instagram tabaha ugu fiican!
July 8, 2019 0 comments 1484
Miyaad ka walwalsan tahay cidda eegaya sawirradaada barta Instagram? Ma rabtaa inaad ogaato cidda adiga ku arkin aamusnaanta, ha ka warqabo xiisaha ama walwal? Hambalyo! waxaad timid meesha saxda ah, maadaama qormada soo socota aan kuu sheegi doono xoogaa xeelado ah sida loo ogaado cidda arka sawirradayda barta Instagram Ma seegi kartid!
Shabakadan bulshada waxaa adeegsada dad badan oo da 'walba leh daafaha dunida. Gaar ahaan in lagu dhajiyo sawiro iyo fiidiyowyo, qaar ujeedooyin shaqsiyadeed leh iyo kuwa kale oo xirfadlayaal ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee wuxuu noqon lahaa mid xiiso leh Ogow cidda soo booqda astaantaada Xaq?
Xusuusnow, sidoo kale waa madal ku habboon farshaxanno badan iyo dad caan ah oo ka socda dalal kala duwan. Dhamaantood, shaki la'aan waa inay la socdaan koontadooda. Ma rabtaa inaad ogaatid sida loo sameeyo? Dare! Oo sii wad akhriska.
Waa maxay sababta taxaddar ugu jirto aaladda si aad u ogaatid cidda aragta sawirradaada Instagram?
Instagram waa shabakada bulshada ee leh dareenka xiisaha iyo u hibeynta, boqolkiiba aad u tiro badan oo dadka ah. In badan sidaa darteed waxay noqotay madal qaabaysa qaab cusub oo suuqgeyn loogu sameeyo.
Sababtaas awgeed, waa wax dabiici ah inaad rabto inaad ogaato cidda ku soo booqda, labadaba xiisaha iyo amniga. Ayaa waxay kuu dhaafi doonaan jeclaanta iyo faallooyinka, u fududee hawshan mid fudud, sababtoo ah ogaysiisyo waad ka ogaan kartaa iyaga.
Laakiin maxaa dhacaya markay iyagu sidaa u sii muuqan? Taasi waa meesha ay wax ka ogaadaan iyo halista ay ka soo baxaan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad aad uga taxadartaa, oo leh farsamooyinka aad u adeegsato raadinta martida aamusnaanta. Waxaan sheegaa sababaha qaarkood:
Qaar badan oo ka mid ah codsiyada, oo sheegaya inay ku tusi karaan kuwa arka sawirradaada, ayaa kaliya doonaya inay ku khiyaaneeyaan. Iyagu way ku darayaan keydkeeda si ay kuugu soo dirto xayeysiin.
Softwares kale ayaa ah xaasidnimo (fayras) oo raba inay galaan PC-gaaga ama taleefankaaga casriga ah inuu waxyeelo u geysto qalabka. Yaan laydin khiyaanayn! Had iyo jeer waydii ka hor intaadan isticmaalin.
Dad kale baa jira dhufto ay iyagu horumariyaan si ay xogta u xadaan sida sawirro, macluumaad shaqsiyeed, faylal iyo faahfaahinta bangiga. Tani, iyada oo ujeedadu tahay in mar dambe la geysto khayaano kombuyuutar ah cybercriminals.
Qaar ka mid ah codsiyadaan waa bilaash, laakiin kuwa kale waxay kugu kalgacal geliyaan jacayl ka dibna way kugu dallacayaan.
Codsiyada ugu caansan ee loo adeegsado si loo ogaado cidda adiga kugu aragta ee Instagram waxaan leenahay:
Ayaa arkay aragtidayda
Ayaa Igu Soo Muuqday Bartiisa Instagram
Waxaan kugula talinayaa, ha ku dhicin jirrabaadda adeegsiga codsiyada khiyaanada ah, qaar badan oo ka mid ahi hawlgalkii way ka baxeen. Inta badan cabashooyinka ka imanaya isla adeegsadayaasha, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad ka feejignaato faallooyinka bulshada.
Had iyo jeer iska hubi qiimeynta ay isticmaaleyaasha kale ay siinayeen codsiyada aad iskudayeyso inaad soo dejiso. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad fikrad ka haysato sumcadda software-ka aad rabto inaad barato.
Xusuusnow, Internetku waa goob u furan dhammaan noocyada dadka. Waxaa jira soo-saareyaal softiweer ah, lehna ujeedooyin wanaagsan iyo kuwa kale oo aan ujeedooyin anshax lahayn.
Si kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, waxaad isku dayday qaar ka mid ah qalabyadan, waxaad danayn doontaa inaad ogaato:
Maxaa la sameeyaa hadaad isticmaasho arji si aad u ogaato cidda ku aragta?
Haddii aad gasho qaar ka mid ah dhufto ee gudaha Runtii iyagu ma ay yaboohaan ballanqaadkooda, Waxaan kugula talinayaa, raac tallaabooyinka hoose:
Ka soo gal websaytka www.instagram.com
Gali magaca isticmaale iyo erayga sirta ah
Aad aaladdaada, u gudub shaashadda dhanka bidix oo guji badhanka astaamaha (cogwheel). Waxay ku taal meel u dhow sawirka astaantaada oo ku taal wakhtiga-line-ka hoosta.
Tag "codsiyada la oggol yahay"
Ka laabashada marin u helka codsiyada aad u malaynayso inay shaki ku jiraan
Beddel lambarka sirta ah oo meel cusub geli.
Ka hor intaadan soo dejisan codsi kasta, hubi in waxtarkiisa, iska ilaali qatarta oo ilaali shabakadahaaga.
Shabakadda bulshada ee Instagram oo ay kaheshay mareegteeda, uma oggolaanayo inuu ogaado cidda eegaysa astaantaada aamusnaan Haddii qof ku arko laakiin ka tegey raad wax raad ah, suurtagalnimada ogaanshaha taasi waa waxba kama jiraan.
Laakiin wali, wali xiiso ayey leedahay ogaada yaa arka sawirada sawirradayda. Haddii aad leedahay shirkad ama astaan ​​shaqsiyeed, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato inaad ogaato tartamayaasha suurtogalka ah. Shaki la'aan, haddii ay tahay xisaab shaqsiyeed, waxaad sidoo kale xiisaynaysaa kuwa aamusnaanta kugu soo booqda.
Kalsooni! In kasta oo sida aan kor ku sheegay khadadka kor ku yaal haddii yaa ku arag ka baxdo raad raac ma ogaan kartid cidda sameysay. Laakiin, waxaa jira xulashooyin haddii ay jiraan raad raacyo. Diyaar ma u tahay inaad ogaato?
Eeg sida loo ogaado cidda arka sawirradayda barta Instagram
Dhib malahan, haddii aad caan tahay, waxaad kor u qaadaysaa sumcaddaada ama waxaad u isticmaali kartaa qof isticmaala barta Instagram. Halkan waxaan ku sheegayaa qaabab qaarkood oo lagu ogaado oo ku arag sawiradaada barta Instagram:
Markay jirto nooc is dhexgalka u dhexeeya isticmaale iyo koontadaada, waxaa jira ogeysiin. Tani waxay dhacdaa kiisaska:
Marka isticmaale, marka aad fiirineyso daabacadahaaga wuxuu dhaqaajiyaa “aniga ii gusta”Sawir ama muuqaal.
Markuu fulinayo, qaar faallo Ku saabsan dhejintaada.
Waxaa jira dad si joogto ah u arka daabacaadaada, taasi waa, waxay sameeyaan Calool xisaabtaada.
Waxaa jira kuwa si qalad ah u qaldama markay ku soo booqdaanna waxay ku siiyaan sida oo kale. Haddii taasi dhacdo, ogeysiinta ayaa dhaqso u gaari doonta mobilkaaga. Laakiin hadaadan ogaanin waqtiga la cayimay oo aad la socotid ogeysiinta, qofka ayaa ku laaban doona ficilkiisa.
Howshan Instagram waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo jiidato dareenka kuwa raacsan ee codsiyada ballaaran iyo kan casriga ah. Sidoo kaleWaa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolsan, inaad ogaato cidda kuu basaasaya aamusnaan. Waxaan sharraxay sababta:
In kasta oo ay muddadu waa saacadaha 24, waxaad haysataa wakhtigaas si aad u ogaato haddii ay arkeen sawirradaada ama fiidiyahaaga. Waxa ugu muhiimsan ee ikhtiyaarkan ah waa inaad garan kartaa cidda ku aragtay, xitaa haddii muuqaalku uusan qaadin tallaabo kale.
Adigoo si joogto ah dib ugu eegaya daawadayaasha sheekooyinkaaga, waad ogaan doontaa cidda ku soo booqda.
Al daabac ugu yaraan hal sheeko maalinle ah, waxaad kaheli doontaa taageerayaashaada, adigoo adeegsanaya tirakoobka.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysaa waa inaad taariikhda gasho, oo aad u rogto, iyo adiga liiska daawadayaashaadu way soo bixi doonaan. Sidoo kale, haddii aad leedahay qof aadan raacin, waxaa jira badhan dabagal ah.
Waxaas oo dhan waa suurtagal sababtoo ah sheekooyinka Instagram, leedahay miiska soo booqdaha Ayaa sameeya diiwaannada.
Halkan micno malahan hadii isticmaalaha uu la falgalayo iyo hadii kale, marka aad daawaneyso sheekadaada waad ogaan kartaa inuu arkay sawirkaas ama fiidiyowgaas.
Xaqiiqda ah in isticmaale uu arko sheekadaada micnaheedu maahan inuu arkay sawiradaada oo dhan ama inuu galay astaantaada guud. Kani wuxuu muujinayaa oo keliya inaad ula kac ama si aan caadi ahayn u aragtid sawirkaas ama muuqaalkaas.
Sababtaas awgeed, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad iska diiwaangeliso muuqaallada sawirradaada, maadaama haddii uu qof si joogto ah u sameeyo. Waxaad ka fiirsan kartaa, liistada, ee "yaa arka sawirradayda".
Qaybtan, waxaad ka heli doontaa hubaal macluumaad muhiim ah oo ku saabsan kuwa raacsan. Waxaa ka mid ah: tirada guud ee raacsan, magaalooyinka iyo waddamada ay ka soo xidhmaan. Intaa waxaa sii dheer, da'da iyo galmada mudnaanta leh, saacadaha iyo maalmaha ay aadka u shaqeeyaan.
Kani kuu sheegi maayo cidda aragta sawiradaada, laakiin wuxuu ku siinayaa a tixraaca nooca dhagaystayaasha in uu ku soo booqdo
Haddii aad leedahay astaan ​​gaar ah, dadka aad aragtay oo keliya ayaa arki kara sawiradaada hore u oggolaaday codsigaaga. Sidan, waxaad durba haysataa fikrad ah cidda keliya ee soo booqan kara astaantaada. Laakiin, ma ogaan doontid inta jeer ee ay sameeyaan ama haddii aysan waligood sameyn.
Ha u ogolaan in ay wax garaddu kugu garaacaan, maxaa muhiim ee shabakaddan bulshada waa in la daabaco sawirro tayo leh, helitaanka kuwa raaca. Tani waxay keenaysaa faa iidooyin ka badan soo degsashada codsiyada kuwaas oo kaliya ku keenaya spam moobiilkaaga ama u tanaasuli amniga.
Waxaan rajeynayaa inaan ka caawiyay su’aalahaaga, isla wixii aan sameeyo faafinta ereyga oo aan dhalleeceeyo codsiyadan. Si aysan dadka kale ugu dhicin dabinka bini-aadamka xun-xun ee kaliya ee ka adkaaday ujeedooyinka si loo gaaro himilooyinkooda.
Ugu dambeyntiina, barta Instagram waa shabakad bulshada ku dhex taal horumar joogto ah. Laakiin, xitaa gudaha xogteeda, ma laha codsiyo u gaar ah oo lagu ogaanayo cidda ku soo booqda. Haddii aad walwalsan tahay saadaalinta sawiradaada,, Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho kaliya dariiqooyinka aan soo sheegnay oo aad na soo raacdid qoraalka xiga.
1 Waa maxay sababta taxaddar ugu jirto aaladda si aad u ogaatid cidda aragta sawirradaada Instagram?
2 Maxaa la sameeyaa hadaad isticmaasho arji si aad u ogaato cidda ku aragta?
3 Eeg sida loo ogaado cidda arka sawirradayda barta Instagram
3.2 Instagram Sheekooyinka
Baro Sida Loo Wadaago Sheekooyinka 'Instagram' Si Aad U Hesho Booqashooyin Badan Oo Ku Saabsan Taariikhdaada